Manoloana ireo vokatra teknolojia avo lenta dia tokony hianatra hatrany amin'ny fanahin'ny "mitondra fitsipika" isika. Tokony hianatra avy amin'ny haitao mandroso isika ary hanavao amin'ny finiavana ary hamerina amin'ny laoniny avy teo alohan'ireo teo alohany.
Na dia mifanaraka amin'ny tsena aza izy ary mifantoka amin'ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia, ny sampana R&D any Shenzhen Sichi dia mifikitra hatrany amin'ny finoana manao firenena matanjaka amin'ny alàlan'ny siansa sy teknolojia ary mamaky hatrany ireo sakana ara-teknika fototra, mba hampiroboroboana ny fandrosoana amin'ny fikarohana siantifika eto amin'ny firenentsika ary hamelombelona ny indostrim-pirenena. Taorian'ny firoboroboana mafy an-taonany maro dia lasa mpisolovava sy mpitarika ny toeran'ny indostria avo lenta any Shina izy ary mampiroborobo hatrany ny fivoaran'ny China hatramin'ny "vita any Chine" ka hatramin'ny "China's Intelligent Manufacturing".
Manaraka ny fanahin'ny fikirizanana, ny fandraisana anjara feno amin'ny fanatsarana kalitao, mandray tsy tapaka ny teknolojia iraisam-pirenena farany, manatsara ny kalitaon'ny vokatra, mahafeno ny filan'ny mpanjifa, amin'ny fifaninanana am-barotra mahery vaika dia noraisin'ny mpanjifa tsara, mitombo isan-taona ny filaharana .
Ny vokatra elektronika dia nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny sehatry ny fitsaboana toy ny fitaovana diagnostika, fanaraha-maso ary fitsaboana. Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia elektronika, ny fampiharana ara-pahasalamana ataon'ireo fitaovana elektronika ireo dia mivoatra tsy tapaka, lasa mahomby sy mahery vaika kokoa, izay mitarika amin'ny fahafaha-manao vaovao tsy voafetra .Ny fototr'ireo fitaovana fitsaboana ireo dia ny PCB. PCB amin'ny indostrian'ny fitsaboana dia manam-pahaizana manokana hahatratrarana ireo teritery miavaka amin'ny fitaovana fitsaboana. Ny PCB ara-pahasalamana dia azo atao amin'ny substrate malefaka ihany koa, izay mamela ny PCB hiondrika mandritra ny fampiasana, izay ilaina amin'ny fitaovana fitsaboana anatiny sy ivelany.
PCB koa dia be mpampiasa amin'ny orinasa mpamokatra entana, ozinina ary orinasa tsy lavitra. Ireo indostria ireo dia manana fitaovana mekanika mahery vaika, izay tarihan'ny boriboritany miasa matanjaka izay mitaky fandehanan'ny rano. Noho izany antony izany, misy varahina matevina mifono eo an-tampon'ny PCB, izay, tsy toy ny PCB elektronika sarotra, dia manana amperes hatramin'ny 100 amperes. Zava-dehibe indrindra izany amin'ny fampiharana toy ny arc welding, servo maotera servo lehibe, charger bateria-asidra plastika, indostrian'ny miaramila ary tsy mazava ny akanjo.
Nahomby ny famoahana chip Chip
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2000.Mandray anjara mavitrika amin'ny 1-32 sosona PCB izahay, ny fikojakojana sy ny fampivelarana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra, ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fitaovana fifandraisana finday. Izahay dia iray amin'ireo orinasa matanjaka sy manan-kery indrindra amin'ireo orinasa toy ny serivisy fijanonana tokana amin'ny fivorian'ny PCB, kopia PCB, clone PCB, famotehana IC, famolavolana PCB, decryption IC, famolavolana chip, famolavolana SMT, famokarana PCB, famokarana prototype ary ny debugging.
Fanafihana IC GD32F103
Fiantohana kalitaon'ny vokatra, fahombiazana avo lenta, fitaovana avo lenta, avo lenta, hanomezana fahombiazana avo lenta, varotra amina orinasa teknolojia iray, serivisy kalitao matihanina ho anao
Ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitry ny asa hoe "maha-matihanina, maharesy lahatra tokoa", ary nanangana ekipa teknika matihanina hanomezana ny mpanjifa serivisy teknika mialoha ny varotra sy aorian'ny fivarotana,
Serivisy avo lenta aorinan'ny varotra, nifikitra tamin'ny foto-kevitra "serivisy aloha" izahay, manaraka ny hanomezana anao ny serivisy fividianana varotra tsara indrindra amin'ny indostria iray manontolo, hamahana ny lafiny rehetra amin'ny olana ara-teknika R&D
Mino izahay fa ny kalitao no fanahin'ny orinasa, ary manome ny indostrian'ny elektronika fotoana maharitra, tolotra injeniera ary famokarana mandroso. Miara-miasa amintsika matetika ireo mpanjifa tsy mivadika, ary rehefa maheno laza tsara ny mpanjifa vaovao dia tonga any Sichi izy ireo hanangana fiaraha-miasa. Manantena ny hanome anao serivisy avo lenta izahay!
Mba hanomezana mpanjifa serivisy decryption serivisy haitao matihanina, mahomby ary mety
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2000. Miasa haingana amin'ny 1-32 sosona PCB izahay, ny fikojakojana sy ny fampivelarana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra, ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fitaovan'ny fifandraisana amin'ny finday. Izahay dia iray amin'ireo orinasa matanjaka sy manan-kery indrindra amin'ireo orinasa toy ny serivisy fijanonana tokana amin'ny fivorian'ny PCB, kopian'ny PCB, clone PCB, famotehana IC, famolavolana PCB, decryption IC, famolavolana chip, famolavolana SMT, famokarana PCB, famokarana prototype ary debu ...
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2000.Mandray anjara mavitrika amin'ny 1-32 sosona PCB izahay, ny fikojakojana sy ny fampivelarana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra, ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fitaovana fifandraisana finday. Izahay dia iray amin'ireo orinasa matanjaka sy manan-kery indrindra amin'ireo orinasa toy ny serivisy fijanonana tokana amin'ny fivorian'ny PCB, kopia PCB, clone PCB, famotehana IC, famolavolana PCB, decryption IC, famolavolana chip, famolavolana SMT, famokarana PCB, famokarana prototype ary debug ...